Archive du 20170216
Kolonely Lylison "Tsy matahotra anareo aho"
Taorian�ny didim-pitsarana manameloka ny kolonely Lylison higadra herintaona sazy mihatra, izay narahina didy fampisamborana, tsy niandry ela ny tenany fa omaly ihany dia namaly bontana tao anatin�ny tambajotran-tserasera fesiboky.
Nijabaka indray raprezy
Vaovao nanaitra omaly ny nahafantarana fa nahazo ny fanamian�ny FC Barcelone na ny Bar�a ny filoham-pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina.
Rajaonah Andrianjaka Mila miaiky heloka ny Frantsay
Mila miaiky ny Frantsay fa meloka ary nanao vono moka teto Madagasikara tamin�ny 1947, hoy ny Antoko politika Otrikafo, tarihin-dRajaonah Andrianjaka.
Kaominina ambonivohitra Taolagnaro Terena hametra-pialana ny filohan�ny Filankevitra
Mafana ny toe-draharaha eo anivon�ny Filankevitry ny tan�nan�i Taolagnaro. Mitaky ny fametraham-pialan�ny filohan�ny Filankevitry ny tan�na, Ramanandraibe Evariste ireo mpanolotsaina.
Mitady tambiny sy tombony !
Io indray ianao ry Jean fa mody miketrika an ! Manaiky anao aloha izahay e !
Famatsiam-bola 10 miliara dolara Mahatratra 15,5% ny zanabola aloa
Niompana tamin�ny paikady fanavaozana miaraka amin�ny fandaharanasa fampiasambola mazava mitondra mankany amin�ny harinkarena tsy manavaka sy maharitra lovainjafy ny fandresen-dahatra
Antanimbarinandriana Hanamboatra � Parking � sy zaridaina ny CUA
Natomboka omaly ny asa fanajariana sy fanamboarana ny toby fiantsonan�ny fiara miampy zaridaina eny Antanimbarinandriana, tontosain�ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
Samuel Christophe -DREN Boeny Nodimandry tampoka
Maloka tanteraka ny lanonam-panamarihana ny andron�ny sekoly tany Mahajanga, renivohitry ny faritra Boeny.
�Vehivavy mizaka tena ara-toekarena� Tetikasa 578 no voaray
Samy manana ny hanitra ho azy, ka nanahirana ny fitsarana ireo tetikasa miisa 578 voaray tamin�ilay fifaninanana tetikasa �vehivavy mizaka tena ara-toekarena�, eo ambany fiahian�ny minisiteran�ny mponina sy ny sampandraharahan�ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana (PNUD) ary ireo mpiara-miombon�antoka ara-teknika sy ara-bola (PTF).
Fikambanana Za�Gasy Tsy misy ny vahoaka madinika
Mety ve ny mimenomenona sy manome tsiny ary manakiana fotsiny manoloana ny raharaham-pirenena amin�izao fotoana izao ? Io no fanontaniana ifotoran�ny fikambanana Za�Gasy
Kolikoly amin�ny fandraisana Mpampianatra Nametra-pialana ny Sefo Cisco Fandriana
Niafara tamin�ny fametraham-pialan�ny fari-piadidiam-pampianarana (Cisco) Fandriana, Andriatsimandravalazasoa Tomboniaina,
Hira any amin�ny karaoke Tokony hakana alalana
Nandritry ny fifampiarahabana nahatratra ny taona nataon�ny fianakaviamben�ny ofisy misahana ny zon�ny mpamorona na ny OMDA niaraka tamin�ireo artista mpikambana rehetra tetsy amin�ny TVM Anosy
TETIBOLAM-PANJAKANA Hatao mazava ho fantatry ny vahoaka
Hatao mazava ho fantatry ny vahoaka eny ifotony manomboka izao ny tetibolam-panjakana.
Journee de l�emploi et de la formation Hanomezana asa manodidina ny 1.500
Mbola betsaka ireo tanora tsy an�asa eto amintsika, eny fa na dia ireo efa nahavita fianarana aza.
Kianjaben�i Mahamasina Hotantanan�ny CUA tanteraka
Nahavelombolo ny mpanao baolina Malagasy na ry zareo avy any ivelany koa ankehitriny ny hatsaran�ny bozaka filalaovam-baolina etsy Mahamasina ankehitriny.
Efa an-taonany maro no niandrandran�ireo vahoaka nifandimby teto amin�ny firenena fandrosoana.